Isifundo: Susa i-DRM kwii-Kindle eBooks | Zonke iReaders
Isifundo: Susa i-DRM kwii-eBooks zohlobo
Namhlanje siza kufumanisa ngale ndlela ilula kodwa egqibeleleyo yokuyisusa i-DRM (Digital Rigths Management) kuzo zonke iimodeli Iincwadi ze-Amazon.
Njengoko sinokubona kwiWikipedia i-DRM yi Ulawulo lwamalungelo edijithali (ngamanye amaxesha kubhalwa nako Ulawulo lwamalungelo edijithali) okanye I-DRM (isifinyezo kwisiNgesi se ulawulo lwamalungelo edijithaliLigama eliqhelekileyo elibhekisa kubuchwephesha bolawulo lokufikelela olusetyenziswa ngabapapashi kunye nabanini be-copyright ukunciphisa ukusetyenziswa kweendaba zosasazo okanye izixhobo.
Amanyathelo aneenkcukacha okususa i-DRM
Okokuqala kufuneka sikhuphele kwaye sifake usetyenziso I-Caliber, apho unokufumana isifundo esibanzi kule webhusayithi, ukuba asikabi nayo ifakwe kwikhompyuter yethu
Khuphela ubungakanani obugqityiweyo obufakiwe Izixhobo zokususa i-DRM yee-eBooks
Unzip ifayile oyikhupheleyo ukuba ikhompyuter yakho ayenzanga ngokuzenzekelayo kwaye ubeke ifolda kwindawo ekhuselekileyo kuba iya kuba yimfuneko kula manyathelo alandelayo
Fikelela kwiCaliber kwaye ukhethe Okuthandayo, emva Guqula indlela yokuziphatha kweCaliber, Advanced, Izinto ezenziwayo kwaye ekugqibeleni Ngenisa iplagi yefayile
Khangela ifolda esithethe ngayo kwinombolo yenqaku 3. Ngaphakathi kwayo kufanele ukuba kubekho ifolda ebizwa Iiplagi zeCaliber ukuba sikhethe
Khetha eyokuqala yeefayile ze.zip kuyo kwaye uyivule. Indlela yokuvula ifayile iya kuxhomekeka kwinkqubo yokucinezela iifayile oza kuzifaka
Ibhokisi yokhuseleko iya kuvela ekufuneka uyamkele ngokunika i Ewe ezakuvela kwiscreen
Cofa apha ukwamukela kwibhokisi yencoko yababini elandelayo eya kuvela
Phinda le nkqubo de udibanise zonke iimodyuli ezikule folda Iiplagi zeCaliber
Ngoku kufuneka siqwalasele Uhlobo lwe-DRM yemodyuli yeMobipocket (0. 4. 5) kwiscreen sePlagi. Kuya kufuneka singenise inombolo ye-serial yemodeli yethu yohlobo, ngaphandle kwezithuba, iihyphen okanye nayiphi na into
Pulsa Faka isicelo kwaye uvale
Ngoku kufuneka sikhuphele Inkqubo yohlobo lweAmazon ikhompyuter ukuba asinayo esele siyifakile njengoko kufanele ukuba ibe yinto eqhelekileyo
Nje ukuba sibe ngaphakathi kwesicelo kufuneka sikhethe kwikholamu yasekhohlo, Umxholo ogciniweyo, apho zonke iincwadi esizithengileyo kwiAmazon kufuneka zivele. Cofa kabini kuzo zonke iincwadi ofuna ukuzikhuphela
Xa ukhuphele zonke iincwadi ze-elektroniki ozifunayo okanye zonke ofuna ukuzijonga, buyela kwiCaliber ukhethe ukhetho; Yongeza iincwadi ezivela kwizikhombisi, kubandakanya necandelwana
Ukuza kuthi ga ngoku kufanele ukuba sibe nazo zonke iincwadi ezingenasimahla kwi-DRM kwilayibrari yethu. Ukuba ubusele ungenise iincwadi ngaphambili, kuya kufuneka uphinde uzingenise ukuze ungazikhuseli
Nceda uqaphele ukuba ukususa i-DRM ezincwadini kukophula imigaqo yokusetyenziswa kweakhawunti yakho yeAmazon esingayijonganga nayo. Yonke into oyenzayo ngesi sifundo iya kuba semngciphekweni wakho.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-iPad yeRetro kunye neemeko zohlobo
Khuphela - I-Caliber Izixhobo zokususa i-DRM yee-eBooks Inkqubo yohlobo lweAmazon
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » iinkampani » Amazon Kindle » Isifundo: Susa i-DRM kwii-eBooks zohlobo
UDaniel Soler sitsho
I-DRM yenzelwe ukuba amalungelo okushicilela angaphuli. Kodwa, ngayo, awucingi ngamalungelo omsebenzisi oyifumene le ncwadi, kwaye ufuna, umzekelo, ukuyifunda kwesinye isixhobo.
Kufana nokuba uthenga incwadi, eyenziwe ngephepha, kwaye unokuyifunda ekhaya kuphela, kwaye awukwazi ukuyikhupha kuyo. Ngokususa isithintelo (i-DRM), ungayikhupha incwadi uyise naphi na apho ufuna khona.
Ayizizo zonke izinto ezibubugwenxa.
Phendula kuDaniel Soler
Molo, ndiwalandele onke amanyathelo kodwa ndancamathela kwinqanaba le-10. Andazi ukuba ndingamisela njani i-kindle.
Molo, enkosi kakhulu ngolwazi. Ndikwindawo yenqaku leshumi kuba kwizincedisi andiboni ndlela yokubeka inombolo ye-serial kwelinye icala endingenayo okoko ndisebenzisa i-app ye-kindel yasimahla ye-ipad, hayi i-kindel nenombolo ye-serial. .
Phendula u Tane
Inombolo yesiriyeli ihlala ishicilelwa okanye iqatshelwe kwisixhobo ngokwaso.
Enkosi kakhulu ngegalelo. Isebenze ngokugqibeleleyo! Ndiyavumelana noDaniel Soler, ndiyibhatalele le ncwadi kwaye indibiza kakhulu ukufunda ekhompyutheni. Ndifuna kuphela izahluko ezimbalwa kwaye ndinyanzelekile ukuba ndisebenze ngokungathandekiyo. Ndiyathanda ukubhala amanqaku emacaleni ephepha kwaye, nangona ndinokuchaza amazwana, akufani.
Enkosi kwakhona ngegalelo!
Ndizama ukukwenza oku ukuhambisa incwadi ethengwe ukusuka kwi-amazon iye kwi-ereader eyahlukileyo.
Ndisebenzisa iLinux kwaye akukho ndlela yakwenza. Konke kuyahla (ndicinga ukuba ekugqibeleni) ukufumana inombolo yohlobo lwe-serial ukuze ndikwazi ukuyenza kwi-linux kodwa ingxaki kukuba andinayo i-kindle ereader. Ingenziwa njani? Enkosi.
Nazi iindlela ezilula zokususa i-DRM yabasebenzisi beApple
Lawula ingqokelela yakho yencwadi yohlobo ngokulula nge-Kindlean
Thelekisa: I-Sony PRS-T1 Vs Sony PRS-T2